System box က ဓာတ်လိုက်ခြင်း [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Hardware Problems » System box က ဓာတ်လိုက်ခြင်း [Problem]
1 System box က ဓာတ်လိုက်ခြင်း [Problem] on 5th December 2009, 6:07 pm
စုစုပေါင်းရေးသားချက်များ : 408
တည်နေရာ : ျမင့္မိုရ္ေတာင္
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2009-11-15
ကျေးဇူးတင်ခံရမှု : 29
ဖိုရမ် အကျိုးဆောင် ရမှတ် : 889
ကျွန်တော်ကွန်ပြူတာက system box က သွားကိုင်ရင်ဓါတ်လိုက်တယ်ဗျ။ အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျာ။
သူကဓါတ်လိုက်ရုံတင်မဟုတ်ဘူး graphic card ကို ပါ ခေါ်သွားတာဗျ။ လုပ်ကြပါအုံးဗျာ။ graphic ဖိုးနဲ ့မွဲတော ့မယ်။
၁ လကို graphic ၁ ကတ်ဆိုလွန်နေပြီးဗျ။
2 Re: System box က ဓာတ်လိုက်ခြင်း [Problem] on 6th December 2009, 10:01 am
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2009-10-30
ကျေးဇူးတင်ခံရမှု : 8
ဖိုရမ် အကျိုးဆောင် ရမှတ် : 50
ဓါတ်လိုက်တာ က အများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဗျ .. လုပ်သင့်တာက အကုန်ပြန်ဖြုတ် ဖုန်တွေ ဘာတွေ သုတ် .. သေချာ ပြန်တပ်ပေါ့ဗျာ .. မလွတ်တလွတ် တပ်မိရင်တော့ ဓါတ်စီးတတ်တာပေါ့
ကျနော့် အထင်ပြောပါတယ် .. [You must be registered and logged in to see this image.] အော် ကဒ်ကိုလည်း သေချာ တပ်ပေါ့ .. ပါ၀ါ ကျွေးတာများရင်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ် .. [You must be registered and logged in to see this image.]
3 Re: System box က ဓာတ်လိုက်ခြင်း [Problem] on 6th December 2009, 3:03 pm
ကျွန်တော်လည်းဖြစ်ဘူးပါတယ်ဗျာ...ကျွန်တော့်စက်ဆိုရင် HDD ကောရှိသမျှ Device ကိုပါဓာတ်လိုက်
တယ်.....သိပ်မကြာပါဘူး.. PSU ပျက်သွားတယ်...လုပ်သင့်တာကတော့ Motherboard အောက်မှာ..
ဖော့ခံလိုက်ပါ.... Graphic Card ကိုလည်း...သေသေချာချာပြန်စိုက်ကြည့်ပါ.....ပြီးတော့ Motherboard အောက်မှာရှိတဲ့ Screw လေးတွေမှာလည်း ကြေးအစွပ်လေးတွေတတ်နိုင်ရင်ကောင်းပါလိမ့်မယ်......
4 Re: System box က ဓာတ်လိုက်ခြင်း [Problem] on 6th December 2009, 7:40 pm
thank ဗျာ ။ နိုပ်လိုက်ပြီးဗျာအားလုံးကို။
5 Re: System box က ဓာတ်လိုက်ခြင်း [Problem] on 27th January 2010, 5:56 pm
စုစုပေါင်းရေးသားချက်များ : 86
တည်နေရာ : Mandalay
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-01-27
ကျေးဇူးတင်ခံရမှု : 15
ဖိုရမ် အကျိုးဆောင် ရမှတ် : 116
ဖြစ်နိုင်တာတွေကတော့ အများကြီးဘဲ တစ်ဆင့်ချင်းစီလုပ်ကြည့်ပါဗျာ။
အရိုးရှင်းဆုံးကတော့ ပါ၀ါပလပ်က 2Pin ဆိုရင် ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းထိုးကြည့် အဲ့ဒါမှ ဓာတ်လိုက်ရင်
Casing မှာ Motherboard ကို ဘယ်လိုတပ်ထားလဲကြည့်ပါ ကြေးတိုင်လေးတွေနဲ့ တပ်ထားရင် အဲဒါတွေနဲ့ Motherboard ကြားမှာ ဖိုင်ဘာ ဒါမှမဟုတ်ရင် ပလပ်စတစ် ၀ါရှာလေးတွေ ခံတပ်လိုက်ပါ။
အဲ့ဒါမှ မရရင် Power Supply လဲပစ်လိုက်ပါ။ ဒါလောက်ဆိုရမှာပါ။
6 Re: System box က ဓာတ်လိုက်ခြင်း [Problem] on 27th January 2010, 7:37 pm
kyawzwathant wrote: ဖြစ်နိုင်တာတွေကတော့ အများကြီးဘဲ တစ်ဆင့်ချင်းစီလုပ်ကြည့်ပါဗျာ။
အဲဒါအပြင်နောက်တစ်မျိုးက ကိုယ့်အိမ်က လျှပ်စစ်လိုင်းမှာ အပ် ၀င်တယ်ခေါ်တယ်နဲ့တူတယ်... အဲလိုဆိုရင်လညး် ဓာတ်လိုက်တယ်... အဲဒါမျိုးဆိုရင်တော့ ကိုယ့်စက်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူး... မီးပြင်ဆရာခေါ်မှရမယ်... ကျနော်လည်းဖြစ်ဖူးတယ်... ကျနော်ကျတော့ မော်နီတာပါ၀ါကြွသွားတာ... တော်သေးတာပေါ့ အဲဒိတုန်းက warranty ရှိသေးလို့..... :luvu :luvu
7 Re: System box က ဓာတ်လိုက်ခြင်း [Problem] on 28th January 2010, 9:45 am
စုစုပေါင်းရေးသားချက်များ : 81
တည်နေရာ : ဂ်ပန္ ( အိုဆာကာ )
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-01-25
ogre wrote: ကျွန်တော်ကွန်ပြူတာက system box က သွားကိုင်ရင်ဓါတ်လိုက်တယ်ဗျ။ အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗျာ။
အကိုရေ ဓါတ်လိုက်တာဆိုတာ ground မချလို့ပါဗျာ ။
ဖော့တွေကို Motherboard အောက်မှာခံထားလိုက်ပါဗျာ ။
graphic card ကတော့ ဓါတ်လိုက်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့တော့ထင်တယ် .
8 Re: System box က ဓာတ်လိုက်ခြင်း [Problem] on 28th January 2010, 2:33 pm
thank for all reply.... i put than button for thanks.... really thank for all....
9 Re: System box က ဓာတ်လိုက်ခြင်း [Problem] on 9th February 2010, 8:12 pm
စုစုပေါင်းရေးသားချက်များ : 12
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2009-10-16
ဖိုရမ် အကျိုးဆောင် ရမှတ် : 12
မီးပြင်ဆရာကို အရင်ခေါ်ပြီး Ground ကြိုးချခိုင်းလိုက်ပါ။ ပြီးရင် AVR Function ပါတဲ့ UPS ကောင်းကောင်းဝယ်ပြီးသုံးလိုက်ပါ။
10 Re: System box က ဓာတ်လိုက်ခြင်း [Problem] on 23rd February 2010, 5:15 pm
စုစုပေါင်းရေးသားချက်များ : 112
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2009-09-24
ဖိုရမ် အကျိုးဆောင် ရမှတ် : 542
3pin socket တစ်ခုဝယ်သုံးလိုက်ပါ။
11 Re: System box က ဓာတ်လိုက်ခြင်း [Problem] on 25th February 2010, 3:44 pm
စုစုပေါင်းရေးသားချက်များ : 65
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2009-11-17
ဖိုရမ် အကျိုးဆောင် ရမှတ် : 102
အပေါ်ကပြောသွားတာလေးကို နဲနဲထပ်ဖော အော် ဟုတ်ပါဘူး ပြောကြည့်မယ်နော်
မီးပလပ် ကို အရင်စစ်ကြည့်ပါ မီးပလပ်မှာ၂ ခု နဲ့ ၃ ခု ဆိုတာရှိတယ် ၂ ခု ကတော့ အပူ နဲ့ အအေးဆိုတာရှိတယ် ။ အပူက ကတော့ လျှပ်စစ်စီးတာ အအေးက တော့ ဘာမှမစီးဘူး ။ ဒါပင်မဲ့ close circus ဖြစ်ဖို့လိိုတယ် နောက် ၃ပင်မှာက တော့ အပူ အအေး
နောက်တစ်ခုက အပ်ဆိုတာပါတယ် ။ အပ် ကဘာအတွက်လဲဆိုတော့ short circus ဖြစ်ရင် ဓါတ်မလိုက်အောင် လုပ်ပေးတာ မပူနဲ့စိတ်ချ မြန်မာနိုင်ငံက အိမ် ၁၀၀ မှာ ၉၉ လုံး မှာ အပ်မချထားဘူး ။ ကန်ထရိုက်နဲ့ ဆောက်ရင်ပိုဆိုးတယ် ၃ပင်ခေါင်းကို electronic
ပစ္စည်းတွေ အများစုမှာတွေ့ရတယ် ။ ကွန်ပျုတာလိုပေါ့ အခု ဓါတ်လိုက်တယ်ဆို တာ ဖြစ်နိုင်တာ အများဆုံး က အပူ အအေးမှားတတ်ထားတာဖြစ်ဖို့များတယ် ။ ဘယ်ကြိုးဟာ အပူ ဘယ်ကြိုးက အအေးလဲသိချင်ရင် tester လေးနဲ့ စမ်း မီးလင်းရင် အပူ အဲ့ဒါကို မှတ်ထား
လိုက်ပြီးရင် ကွန်ပျုတာ ကြိုးကို ခွာကြည့် အဲ့ဒီ မှာ အပူကြိုး ကို ပုံမှန်အားဖြစ် အနီရောင်ပေးတတ်တယ် အဲ့ဒါနဲ့ မှန်အောင်လုပ်လိုက်ရင် ဓါတ်မလိုက်တော့ဘူး ။ နောက်တစ်ခုက အဲ့ဒါကိုဘယ်သူမှ သတိထားပြီးမလုပ်ဘူး ပုံမှန်ဆို ဘယ်လိုလုပ်လုပ်ဓါတ်မလိုက်ဘူး ပစ္စည်း
အတွင်းမှာ short circus လို ဖြစ်တာတို့ ကြိုးလိုင်းပေါက်တာတို့ဆိုလိုက်ပြီ အဲ့ဒီလိုမှားရင် နောက် တစ်ခုက တော့ အပေါ်ကပြောသလို့ case အတွင်းကို သန့်ရှင်းရေးရယ် ပြန်ဖြတ်ပြန်တက် လုပ်ကြည့်ပါ ground ချနည်းပြောရင်ရှည်ကုန်တော့မယ် သိချင်ရင်
12 Re: System box က ဓာတ်လိုက်ခြင်း [Problem] on 26th February 2010, 1:27 pm
စုစုပေါင်းရေးသားချက်များ : 131
တည်နေရာ : ပဲခူး
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-01-22
ဖိုရမ် အကျိုးဆောင် ရမှတ် : 157
ground မလွတ်ရင်ဓာတ်လို်က်တတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဖျာခင်းပြီးကိုယ်ကိုကိုယ် ထိုင်လိုက်တယ်။ ဟဲဟဲ
ခုံပေါ်ဆိုရင်လည်းခြေထောက် ပါတင်ထိုင်တယ်။ ဟဲဟဲကျန်တာတော့ ရှုပ်လို့မလုပ်ဘူး။
13 Re: System box က ဓာတ်လိုက်ခြင်း [Problem] on 26th February 2010, 3:29 pm
အခု ထိ လုပ်လို့ မရ သေးဘူးလား
စက်ရဲ့အောက်မှာ ဖေါ့ သို့ မဟုတ် ပလပ်ခေါင်းကို ပြောင်းပြန် တက်လိုက်ပါ ရသွားပါလိမ့်မယ်
14 Re: System box က ဓာတ်လိုက်ခြင်း [Problem] on 26th February 2010, 6:14 pm
စုစုပေါင်းရေးသားချက်များ : 439
တည်နေရာ : Myanmar:\_Yangon\_Thingangyun Ts
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2009-05-26
ကျေးဇူးတင်ခံရမှု : 34
ဖိုရမ် အကျိုးဆောင် ရမှတ် : 1010
လင်းထက် wrote: ground မလွတ်ရင်ဓာတ်လို်က်တတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဖျာခင်းပြီးကိုယ်ကိုကိုယ် ထိုင်လိုက်တယ်။ ဟဲဟဲ
အလွယ်ဆုံး နဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဆိုတာ ကိုယ်တွေ ့ပါပဲဗျာ။
Dear members, please type with Myanmar3font. And please read this announcement.
15 Re: System box က ဓာတ်လိုက်ခြင်း [Problem] on 20th March 2010, 4:25 pm
စုစုပေါင်းရေးသားချက်များ : 11
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-03-18
ဖိုရမ် အကျိုးဆောင် ရမှတ် : 15
ground မလွတ်လို့ ဓါတ်လိုက်တယ်ဆိုတာ မြေညီထပ်သံမန်သလင်းတွေမှာ ဘဲတွေ့နိုင်ပါတယ် ။
အထက်အမြင့်တွေမှာတော့ မလိုက်နိင်ပါဘူးခင်ဗ ။
စာရိုက်ရင် Space ခြားပြီးရိုက်ပေးပါခင်ဗျာ
16 Re: System box က ဓာတ်လိုက်ခြင်း [Problem] on 22nd March 2010, 5:57 pm
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2009-10-25
ဖိုရမ် အကျိုးဆောင် ရမှတ် : 158
လူ့ခန္ဒာကိုယယ်တွင်းမှာ တည်ငြိမ်လျှက်စစ်ဆိုတာရှိပါတယ် တစ်ကယ်လို့ သံမံတလင်းတို့ အုတ်နံရံတို့နဲ့ လူရဲ့ခန္ဒာကိုယ်နဲ့
ထိနေရင် လဲဖြစ်တတ်ပါတယ် တည်ငြိမ်လျက်စစ်ကို် ဖျောက်ပေးတဲ့ လက်ပတ်လေးတွေထွက်ပါတယ် ဒီမှာရှိမရှိတော့ မပြောတတ်ဖူးဗျ။ ကောင်းတာကတော့ ကိုလင်းထက်ပြောသလို ခန္ဒာကိုယ်ကို သံမံတလင်း တို့ အုတ်နံရံတို့နဲ့မထိအောင်ထားပါ။ ဖြစ်နိင်ရင် ကွန်ပျူတာကိုပါ မထိ်မိအောင်ထားပါ။ graphic card ကတော့ နဲနဲပြန်စစ်လိုက်ပါ။ graphic card ထိုးတဲ့အပေါက်နဲ့ card ရဲ့ ဆားကစ်လိုင်းကို် ပြန်စစ်လိုက်ပါဗျာ။
17 Re: System box က ဓာတ်လိုက်ခြင်း [Problem] on 28th April 2010, 3:21 am
htet myat thwe
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-04-27
ကျွန်တော့ laptop က cq40 158 tu compaq ဖြစ်ပါတယ် တစ်ရက်တည်း ၀င်းဒိုး နှစ်ခါ တင်လိုက်တာ အောက်ပါမက်ဆေ့ချ် တက်လာပါတယ် enter ခေါက်လိုက်ရင်တော့ ကျော်သွာပြီး ပုံမှန်အတိုင်းဆက်သွားပါတယ်..
SMART HARD DICK Error..The SMART HARD DICK check has detected an imminent failure. To ensure not data loss, please backup the content immediately and run the HARD DISK TEST in system Diagnostics. အဲ့ဒါလေးပျောက်သွားအောင် သိတဲ့သူများ အကူအညီပေးကြပါအုံး ...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား
18 Re: System box က ဓာတ်လိုက်ခြင်း [Problem] on 27th May 2010, 6:16 pm
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-04-21
HDD ရဲ့ feature တစ်ခုဖြစ်တဲ့ S.M.A.R.T function ကို on ထားလို့ဗျ
ပိတ်ချင်ရင်တော့ BIOS ထဲဝင်ပြီးပြင်ပေးလိုက်ပါ...ပြီးတော့ သူကရောင်းရင်းရဲ့ Hard disk လေး damageဖြစ်နေကြောင်းသတိပေးတာပါ.....
19 Re: System box က ဓာတ်လိုက်ခြင်း [Problem] on 28th May 2010, 5:22 pm
aung ko wrote: ground မလွတ်လို့ ဓါတ်လိုက်တယ်ဆိုတာ မြေညီထပ်သံမန်သလင်းတွေမှာ ဘဲတွေ့နိုင်ပါတယ် ။
အထပ်အမြင့်တွေလည်း သံမန်သလင်း နဲ ့ဒါမှမဟုတ် အုတ်နံရံနဲ ့ထိရင် ဓါတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။
Tester စမ်းတဲ့အခါမှာလည်း နံရံကို လက်တစ်ဖက်နဲ ့ထောက်ပြီး စမ်းရင် ပိုတိကျတဲ့ Result ကိုရပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျွန်တော်တို ့လို EP တွေပိုသိတဲ့အချက်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။ ကွန်ပျူတာမှ ထွက်သော Voltage ကိုသာဆိုလိုပါသည်။
20 Re: System box က ဓာတ်လိုက်ခြင်း [Problem] on 6th June 2010, 10:12 pm
စုစုပေါင်းရေးသားချက်များ : 26
တည်နေရာ : မႏၱေလးျမို.
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-03-15
ဖိုရမ် အကျိုးဆောင် ရမှတ် : 30
တချို.လုပ်ထားတာ graphic ကဒ်ကို နတ်မကျတ်ဘူး ဒီတိုင်းတပ်ထားတာ ရမ်းနေတာဘဲ သေချုာပြန်တပ်ကြည်.ပါဘာလို.လဲဆိုတော. သေချုာတပ်လိုက်ရင် ဓာတ်ကတန်းသွားမှာလေ သေချာမတတ်ဘဲနဲ. အရှင်ထားရင်တော.လျော.ဖြစ်တတ်တယ် ကျွန်တော်.အတွေ.အကြုံပါ
တတ်သလောက်မှတ်သလောက်လေးပြောတာ ပါ အဆင်ပြေပါ.စေနော် motherboard ကဆိုရင်တော.
ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး လို. ထင်ပါတယ်
21 Re: System box က ဓာတ်လိုက်ခြင်း [Problem] on 7th June 2010, 1:47 pm
ကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်ပါသေးတယ်အဝင်မှာလဲ power များနေရင် graphicကဒ် လစ် တတ်ပါတယ်
ဘယ်boardမှာတော. ဘယ် power supplyသုံးသင်.တယ်ဆို တာလည်းပြောပြပေးပါနော်
22 Re: System box က ဓာတ်လိုက်ခြင်း [Problem] on 8th June 2010, 2:52 pm
ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ် ဖြစ်နိုင်တာပေါ.နော် motherboardက လက်ခံတာနဲ.power supplyက ပေးတဲ.powerမမျှရင် လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်
23 Re: System box က ဓာတ်လိုက်ခြင်း [Problem]